Ahoana no ahafahan'ny mpivarotra manatsara ny fampielezan-kevitra amin'ny Krismasy finday hampitombo ny vola miditra | Martech Zone
Ahoana no ahafahan'ny mpivarotra manatsara ny fampielezan-kevitra amin'ny Krismasy finday mba hampisondrotra ny vola miditra
Alatsinainy Desambra 1, 2014 Douglas Karr
Amin'ity vanim-potoana Krismasy ity, ny mpivarotra sy ny orinasa dia afaka mampitombo ny vola miditra amin'ny fomba lehibe: amin'ny alàlan'ny marketing amin'ny finday. Amin'izao fotoana izao dia misy 1.75 miliara tompona finday avo lenta eran'izao tontolo izao ary 173 tapitrisa any Etazonia, mitaky 72% ny tsenan'ny finday any Amerika Avaratra.
Ny fiantsenana an-tserasera amin'ny alàlan'ny fitaovana finday dia vao haingana no nahatratra ny birao voalohany ary 52% ny fitsidihana tranonkala izao dia atao amin'ny alàlan'ny telefaona finday. Na izany aza, ny fotoana iasan'ny mpanjifa amin'ny hetsika marketing toy ny mailaka dia mety ho telo segondra. Ny fahalalana ny zava-niainan'ny mpampiasa finday dia tena zava-dehibe tokoa ho an'ireo mpivarotra am-barotra mba hampitombo ny ezaka amin'ny varotra sy hampisondrotra ny varotra mandritra ny fialantsasatra.
Amin'ny alàlan'ny fametrahana ny finday eo afovoan'ny paikady omni-channel, ny mpivarotra sy ny marika dia hahafahan'ny sehatra fifanakalozana, fifampiraharahana, resaka ary fahatokisana vaovao. Ary ny vola miditra. FitForCommerce
SmartFocus dia manolotra fomba fijery vitsivitsy ao aminy Torohevitra Marketing amin'ny finday ho an'ny mpivarotra sy orinasa. Ity misy topy maso kely amin'ny torohevitra marketing amin'ny finday 5 an'ny orinasa.
Manatsara ny finday - 30% amin'ireo mpividy finday mandao ny fifanakalozana traikefa amin'ny mpampiasa azy ireo dia tsy nohamarinina ho an'ny findainy. Hamarino tsara fa toa mahavariana amin'ireo mailaka rehetra ny mailakao.
Raiso ny fotoana, ny toerana ary ny akaiky ny mpanjifanao - Fantaro hoe rahoviana, aiza, ary manao ahoana ny akaiky an'ireo mpanjifanao finday rehefa mitady izy ireo. Ho gaga ianao fa firy ny mpanjifa azonao sintonina fotsiny mifototra amin'ny marketing amin'ny mpanjifa mifototra amin'ireo lafin-javatra tsotra ireo, ahafahanao mampiasa tsara ny fampielezan-kevitrao ary mampitombo ny varotra amin'ny farany.
prévenir Fampirantiana sy fanamorana ny Internet - Ny efitrano fampirantiana dia ambany noho ny idealy raha momba ny varotra antsinjarany mandritra ny fialantsasatra. Webrooming (fantatra koa amin'ny hoe fampiroboroboana fampisehoana), etsy ankilany dia ny zava-mitranga rehefa mikaroka ny vokatra an-tserasera ny mpanjifa alohan'ny hidirany amin'ny magazay hanao ireo fividianana ireo. Araka ny Forrester Research, ny tranokala webrooming dia hiteraka $ 1.8 trillion amin'ny 2017, raha ny varotra ecommerce dia tokony hahatratra $ 370 miliara amin'ity taona ity; webrooming no hanjakan'ny mpandresy amin'ny ho avy mpivarotra. Zava-dehibe ny famoronana famporisihana ho an'ny mpanjifa hiditra ao amin'ny fivarotanao ary hividy ny vokatrao raha tokony hividy azy ireo an-tserasera amin'ny vidiny ambany indrindra amin'ny tranonkala.
Ataovy mora ny fitadiavana finday - 57% amin'ireo mpanjifa finday no handao ny tranokalanao raha toa ka mila miandry telo segondra izy ireo vao hamoaka pejy iray. Raha ny marina, isaky ny fiakarana 100 millisecond amin'ny fotoana enta-mavesatra dia mampihena ny varotra 1%. Hamarino tsara fa miakatra haingana ny pejinao ary manatsara ny fahazoana miditra amin'ny finday.
Ampiharo ny teknolojia fanilo - marketing eo akaiky mitana andraikitra vaovao lehibe amin'ny fampidinana ny varotra an-tserasera sy ivelan'ny Internet amin'ny alàlan'ny teknolojia fanoloran-kevitra mialoha izay mampiavaka ny hafatra amin'ny marketing ho an'ny mpampiasa tsirairay miorina amin'ny toerana misy azy ireo, ny fihetsika varotra virtoaly sy ara-batana ary ny tontolon'ny fanapahan-kevitr'izy ireo mety hividy. SmartFocus dia mpitarika amin'ny haitao fanilo ary mampiasa azy io hanolotra hevi-baovao lalina amin'ny mpanjifany.
Ho fampahafantarana feno dia aza hadino ny mitsidika ny SmartFocus ' Torohevitra Marketing amin'ny finday ho an'ny mpivarotra sy orinasa.
Tags: teknolojia fanilokrismasy findayfanatsarana findaykaroka findaymarketing eo akaikyfampiroboroboana fampisehoanashowroomingsmartfocusmarketing amin'ny finday smartfocuswebrooming
Fanentanana B2C Multi-Channel mahatsapa fiverenana 24% lehibe kokoa amin'ny fampiasam-bola